Home Horyaalka Ingiriiska Paul Pogba oo ka hadlay hadii uu doonayo heshiiska Cusub ee Manchester...
Paul Pogba ayaa lagu soo waramayaa inuusan meesha ka saarin suurtagalnimada inuu qandaraas cusub qalinka ugu duugo kooxda Manchester United .
Ku guuleystaha Koobka Adduunka ayaa si aad ah loola xiriirinayay inuu ka tagayo Old Trafford tan iyo bishii Juun 2019, wararka la isla dhexmarayo ayaa ka dhashay hadalo sheegaya inuu doonayo inuu qabto tartan cusub.
Si kastaba ha noqotee, 27 jirkaan ayaa ku riyaaqay waqti ka xoog badan tan iyo bishii Diseembar, isagoo dhaliyay seddex gool isla markaana sameeyay waxqabadyo muhiim ah intii lagu jiray dhowr guulo muhiim ah.
Sida laga soo xigtay United.no , Pogba ayaa haatan doonaya inuu wadahadalo ka yeesho heshiisyada cusub ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga xagaaga.
United ayaa dooneysa inay ka fogaato inay lumiso mid ka mid ah hantidooda ugu qiimaha badan si xor ah 2022, United ayaa dooneysa inay xal ka gaarto bilaha soo socda.
Real Madrid iyo Juventus ayaa ka mid ah kooxaha sii wadaya inay la socdaan xaalada.
Previous articleWeeraryahan horey uga tirsanaa kooxda Liverpool oo geeriyooday
Next articleWilfried Zaha oo maqan Kulanka kooxdiisii ​​hore ee Man United la ciyaarayaan